Ku saabsan EISEN - Warshadaha SHENZHEN EISEN XADAD LEH
EISEN Warshadaha Xaddidan (KUANGYE DONGGUAN TECHNOLOGY CO., LTD) waxay ku taalaa Tuulada Lianhu, Tangxia Town, Magaalada Dongguan oo leh gaadiid ku habboon, oo leh aag dhisme ka badan 5,000 oo mitir murabac ah.
Waqtigan xaadirka ah, qalabka farsamada ee shirkadda waxaa ka mid ah: 10 khadadka isku dhafan ee otomaatiga ah, in ka badan 40 waji-daboole caafimaad oo la tuuri karo & khadadka wax-soo-saarka tooska ah ee KN95 FFP2, sheybaar koronto oo dhameystiran,
iyo sameynta dhinac saddexaad oo la xaqiijiyay 100, Aqoon-isweydaarsi aan lahayn boodh-000, Sheybaar caafimaad oo heerkiisu yahay 10,000, iwm. Awood wax soo saar oo xoogan iyo koox shaqaale ah oo si wanaagsan u tababaran. Bishii Maarso 2020, shirkadda
maray ISO13485 & GMP caafimaad shahaadada nidaamka tayada qalabka, iyo Bishii Meey 2020 waxay heshay liisanka wax soo saarka aaladda caafimaadka ee heerka labaad II, iyo sheyga ayaa maray shahaadada gudaha iyo tan caalamiga ah
hay'adaha xirfadeed. EISEN Warshadaha XADDIDAN waxay si isdaba joog ah u fuliyaan hal-abuurnimada tikniyoolajiyadeed waxayna sii qoto dheereeyaan dib-u-habeynta nidaamka tayada, iyadoo aasaas adag u ah xaqiijinta aragtideena shirkadeed. U ogolow qof walba inuu ku raaxeysto caafimaad iyo qurux!
Si loo hubiyo badqabka iyo tayada alaabada laga soo xigtay isha, waxaan si taxadar leh u xulnay warshadaha''s alaabada ugu sareysa ee alaabta ceyriinka ah ee wada shaqeynta muddada-dheer iyo saxiix iyo heshiis alaab-qeybiye daacad ah oo lala saxiixdo in ka badan 20 shirkado.
Waxaan kaqeyb galnay carwooyin badan oo kadhacay Shiinaha, ganacsatada kazoo jeeda Shiinaha aad bey u daneynayaan wax soo saarkeena.
Qaar badan oo ka mid ah iibsadayaasha dibedda ayaa aad ugu qanacsan alaabtayada. Waxaan si adag uga shaqeynaynay sidii aan u bixin lahayn badeecooyin iyo adeegyo tayo sare leh. Waxaan ku darsan doonaa tabaruceena muddadan gaarka ah. Fadlan ku kalsoonow inaad na doorato, waxaan ku siin doonaa xalka ugu fiican.
Warshadeenu dhamaantood waxay qaadanayaan aqoon isweydaarsiga boodhka ka caagan, kadib annaga waaxda amniga qaranka ee baaritaanka, haddii ay tahay mashiin, qalab ama shaqaale maalin kasta shaqo fiican qabtaan, jeermiska wanaagsan oo ay aamusaan caafimaadka, maadaama faahfaahin kasta oo laga helayo isha, isticmaalka adag ee ilaalinta, shaqo fiican ka samee xiriirin kasta oo lagu xirayo, iyada oo xoogga la saarayo badeecooyinka iyo dhammaan tusmada asaasiga u ah ilaalinta caafimaadka shaqaalaha.
Shirkaddu waxay la macaamilaysaa faahfaahin kasta oo shaqada ah iyada oo la socota dabeecad iyo qaab mahadnaq leh. Dhanka kale, badeecada ugu horeysa marwalba waxay lajirtaa welwelka aan ka qabno xaalada cudurka faafa iyo ducada xalka hore.
Waxaa xaqiijiyay Intertek
Nooca Ganacsiga ------ Soo-saare
Wadan / Gobol --- Guangdong, Shiinaha
Waxyaabaha Ugu Muhiimsan --- Maaskaro Waji Caafimaad Oo La Tuurin Karo (Kuwa Aan Asiifka Ahayn), Maaskarada Wejiga La Tuuri Karo, Maaskarada Dadweynaha ee KN95, FFP2 maaskaro wajiga, Maaskarada Difaaca Caafimaadka, Heerkulbeegga Aan La Xiriirin
Lahaansho ------ Mulkiilaha Gaarka ah
Wadarta Shaqaalaha --- 101 - 200 Qof
Wadarta Dakhliga Sannadlaha ah - qarsoodi ah
Sanad La Aasaasay --- 2019
Shahaadooyinka (1) --- ISO13485
Suuqyada Waaweyn --- Afrika 35.00%
Galbeedka Yurub 25.00%
Waqooyiga Ameerika 22.00%
Cabbirka Warshadda 3,000-5,000 mitir murabac ah
Wadan / Gobol Warshad ah Qolka 501 Dhismaha 1, No.1 Dong Yuan Wu Lu Rod, Lianhu, Tengxie TownDngguan Qaylo, Gobolka GuangdongChine
Tirada Khadadka Wax Soo Saarka Xagga sare 10
Wax soosaarka qandaraaska Adeegga OEM Waa La Bixiyay Adeeg Naqshadeed La Siiyay
Qiimaha Soo Saarka Sanadlaha Xagga sare USS100 Mllion
Awood Wax Soo Saar Sanadeed
Magaca Magaca Wax soosaarkaLineCepecity ActualUnitsProduced (PreviousYear) La xaqiijiyay
La tuuroMedicalFaceMask (Aan ahayn
Aseptic) 2000000Units / Bisha 20000000Units √
La tuuroFaceMask 2000000Units / Bisha 10000000Units √
KN95PublicMask 500000Units / Bisha 3000000Units √
MedicalProtectiveMask 500000Units / Bisha 3000000Units √
La Xiriir la'aanInfraredThermometer 100000Units / Bisha 1000000Units √